(၁၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးများအား စတင်ကျင်းပလျက်ရှိ | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » (၁၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးများအား စတင်ကျင်းပလျက်ရှိ » အထွေထွေ
Tue, 12/01/2020 - 11:52 -- journal_editor
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွမ်ရှီး(ကျွမ့်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ နန်နင်းမြို့တွင် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများအား နှစ်စဉ်ကျင်းပလာခြင်းမှာ (၂၀၀၃)ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာလတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ (၁၀+၁)ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ စတင်မြစ်ဖျားခံလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ထိုအချိန်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဝမ်ကျား ပေါင်က တရုတ်-အာဆီယံလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေး နယ်မြေတည်ဆောက်ရေးအား အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် နှစ်စဉ် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပသွားရန် စတင်အဆိုပြုခဲ့ကာ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက တညီတညွတ်တည်း သဘောတူညီခဲ့ကြသဖြင့် (၂၀၀၄)ခုနှစ်မှ စတင်ကျင်းပလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခု (၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့ကို ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ (၁၇)ကြိမ်တိုင် ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်ပြပွဲအား နိုဝင်ဘာလ ၂၇ နေ့မှ ၃၀ နေ့အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး၊ ပြပွဲ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ “ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား အားကောင်းခိုင်မာစေရေး” (Building the Belt and Road, Stregthening Digital Economy Cooperation)ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ်သည် တရုတ်-အာဆီယံလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုနယ်မြေ တည်ထောင်ခဲ့သည့် (၁၀)နှစ်ပြည့်မြောက်သောကာလဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်-အာဆီယံ ဒစ်ဂျစ် တယ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့်မြောက်သော နှစ်လည်းဖြစ်သဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအပါအဝင်ကဏ္ဍများ၌ အရေးကြီးသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အရေးပါသော နှစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
(၁၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီ အချိန်၌ နန်နင်းမြို့ Nanning International Convention & Exhibition Center ၌ ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဖွင့်ပွဲသို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံရေးဗျူရို အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ၊ ပြည်ပရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မရှင် ဉက္ကဌ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် Mr. Yang Jiechiက နန်နင်းမြို့တွင်ပြုလုပ်သည့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ကြီးမှူး ဆောင်ရွက်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ H.E Mr. Xi Jinping၊ လာအို နိုင်ငံဝန်ကြီချုပ် H.E Mr. Thongloun Sisoulith၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သမ္မတ H.E Mr. Joko Widodo ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတကြီး ဉီးဝင်းမြင့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ H.E Mr. Rodrigo Roa Duterte၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် H.E Mr. Hun Sen၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် H.E Gen. Prayut Chan-o-cha၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် H.E Mr. Nguyen Xuan Phuc ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ H.E Dr. Arif Alvi၊ အာဆီယံအတွင်းမှူးချုပ် H.E Hr. Lim Jock Hoiတို့က ဗွီဒီယိုဖြင့်မိန့်ခွန်းများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ သမ္မတ H.E Mr. Xi Jinpingက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား နိုင်ငံအချင်းချင်း ယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်တည် ဆောက်သွားရန်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအား တစ်ဆင့်မြှင့်တင်သွားရန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအား ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်အား အတူလက်တွဲ တည်ထောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ တရုတ်-အာဆီယံသတင်းအချက်အလက်ဌာနအား တည်ထောင်ကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်တို့အား အဆိုပြုခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်၊ လျှပ်စစ်စသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအား အတူလက်တွဲ၍ တည်ဆောက်သွား မည်ဖြစ်ကာ၊ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကဲ့သို့သော ဒေသတွင်းအစီအစဉ်များကို အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ဈေးကွက်များ အပြန်အလှန် ဖွင့်ပေးရေးအတွက် ပိုမိုနီးစပ်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဝေးမှ ဆေးကုသပေးခြင်းနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးကဲ့သို့သော နည်းပညာကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် တရုတ်-အာဆီယံသတင်းအချက်အလက်ဌာနအား တည်ထောင်ကာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်အား အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ကာ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးအား ပူးတွဲသုတေသနပြု တီထွင်ဆန်းသစ်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်းတို့အား တရုတ်သမ္မတက အလေးပေးထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဉီးဝင်းမြင့်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာဆီယံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို ကြိုဆိုကြောင်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၎င်းနေ့ နေ့လည် ၁၄:၀၀ အချိန်၌ တရုတ်-မြန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ် (၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် (၂၀၂၀)အား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဖိုရမ်၌ အပိုင်း (၁)တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E Mr. Li Chenggang၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဉီးမျိုးသန့်ဖေတို့က မိန့်ခွန်းများအသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကွမ်ရှီး ကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E Mr. ZHOU Hongboနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဉီးမျိုးသန့်ဖေတို့က အမှာစကားများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ အပိုင်း(၂)တွင် နန်နင်းမြို့ မြန်မာကောင်စစ် ဝန်ချုပ်ရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး ဒေါက်တာရွှေစင်ကိုက “မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အခွင့်အလမ်းများ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ Guangxi Haokai Biotechnology Co., Ltd.နှင့် Guangxi Shengweida International Trading Co., Ltd. တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရာ၌ ရရှိသော အောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုလည်းကောင်း အသီးသီးပြောကြားဝေမျှခဲ့ကြ ပါသည်။
ထို့နောက် (၁၇)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး စားပွဲဝိုင်းအစည်းအဝေးအား နေ့လည် ၁၅:၀၀ အချိန်၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအစည်းအဝေးသို့ တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များက အွန်လိုင်းမှလည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပရာ နေရာ၌လည်းကောင်း အသီးသီး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်နေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒများအား မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကပ်ရောဂါ အလွန် ကာလတွင် တံခါးဖွင့်ကြိုဆိုမည့် နယ်ပယ်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများရှှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရာ၌ ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြင်မှုအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ အာဆီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား အမြင်များ ဖလှယ်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးသောင်းထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒနှင့် ကပ်ရောဂါအလွန်ကာလ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း များအကြောင်းကို ဗွီဒီယိုဖြင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ နန်နင်းမြို့ မြန်မာ ကောင်စစ် ဝန်ချုပ်ရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး ဒေါက်တာရွှေစင်ကိုက နန်နင်းမြို့တွင်ကျင်းပသော အစည်း အဝေး၌ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင်မူ ၎င်းကုန်စည်ပြပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းများလာရောက် ပါဝင်ပြသခဲ့ကြသော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကြောင့် လာရောက်ပြသရန် အခက်အခဲများစွာရှိကြသဖြင့် ပေကျင်းမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး၊ နန်နင်းမြို့ရှိ မြန်မာကောင်စစ် ဝန်ချုပ်ရုံးနှင့် မြန်မာစီးပွားရေးသံမှူးရုံးတို့က တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ ပေးပို့ ထားပြီး ပြသပေးနိုင်မည့်သူများရှိသည့် မြန်မာကုမ္ပဏီများနှင့် မြန်မာကုန်ပစ္စည်းများကို ခင်းကျင်းပြသပေးနိုင်မည့် မြန်မာနှင့်မိတ်ဖက်ပြုထားသည့်တရုတ်လုပ်ငန်းများကို စုစည်း၍ ပြခန်းစုစုပေါင်း (၂၈)ခန်းဖြင့် ပါဝင်ပြသပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့ပြင် ပြပွဲသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခင်းကျင်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အာဆီယံ နိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းများအတွက် အွန်လိုင်းပြပွဲတစ်ရပ်ကိုလည်း တစ်ပြိုက်နက်တည်း ခင်းကျင်းထားရှိပြီး၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအွန်လိုင်း ပြပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်စည်ပြခန်းပေါင်း (၃၆)ခန်းပါဝင်ပြသထားပြီး ၎င်းကုန်စည် ပြခန်းနေရာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် linkမှာ https://e.caexpo.org/national-image/detail? id=19&locale=en-us ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း၊ ပွဲတော်များ၊ လှပသည့် အထင်ကရနေရာများနှင့် စီးပွားရေးအကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် image display၏ linkမှာ https://e.caexpo.org/exhibition-group/detail?id=412&locale=en-us ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ခင်းကျင်းပြသမှုများအပြင် အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးမှ အထူးကုန်ပစ္စည်းများအား Livestreaming ဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မိတ်ဆက်သည့် လှုပ်ရှား မှုလည်းပါဝင်ရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်များကို မိတ်ဆက်ထုတ်လွှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ ခင်းကျင်းပြသမှုနှင့် နန်နင်းမြို့ရှိ ကုန်စည်ပြပွဲ၌ လာရောက်ခင်းကျင်းပြသကြသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ်များတွင် ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဆန်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကြာလက်ဖက်ရည်၊ အော်ဂဲနစ်လက်ဖက်အစို၊ မက္ကဒေးမီးယားအစေ့ အဆန်၊ အဝတ်အထည်၊ သစ်သီးဝလံ၊ ဘီယာ ကဲ့သို့သော စားသောက်ကုန်များ၊ ငရုတ်သီး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲ၊ သရက်သီးကဲ့သို့သော စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံထွက်ကုန်များ၊ ငါးအမျိုးမျိုး၊ ငါးရှဉ့်၊ ငါးအသားလွှာစသည့် ရေထွက်ကုန်များ၊ သစ်သားထည် အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ကျောက်စိမ်းနှင့် ပယင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လက်ဝတ်ရတနာမျာ၊ သတင်း အချက် အလက်နှင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီများအပြင် ကြက်သားဟင်း၊ ဘဲသားဟင်း၊ ဆိတ်သား ဟင်း၊ ငါးသလောက်ပေါင်း၊ ငါးကြင်းပေါင်းကဲ့သို့သော အသင့်စားဟင်းအမျိုးမျိုး၊ ဒန့်သလွန်မှုန့်၊ ဒန့်သလွန်ဆီ၊ ဒန့်သလွန်ဆပ်ပြာကဲ့သို့ ဒန့်သလွန်ထုတ်ကုန်များ၊ သဘာဝသစ်သီး ဝလံဖျော်ရည်များ၊ အုန်းသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် စားသောက်ကုန်များ၊ ကြာမျှင်ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသောအထည်များ၊ ထန်းသကြားမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ နာနတ်သီးစည်သွပ်ဗူး၊ နာနတ်သီးခြောက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးခြောက်၊ ချဉ်စော်ကားသီးခြောက်စသည့် တန်ဖိုးမြှင့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ်သစ်များလည်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့သည့် ၁၆ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည် ပြပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုး၊ တန်ဖိုးမြှင့် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ၊ ကြိမ် ထည်၊ သစ်သားအနုပညာလက်ရာများ၊ သဘာဝ ဆိုးဆေးဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော ချည်ထည် များ၊ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ အဖိုးတန် ကျောက်မျက် ရတနာများစသည်တို့ကို ပြခန်းပေါင်း ၁၆၅ ခန်းဖြင့် တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၉၃၇ သန်းဖိုး ပါဝင်ပြသခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် Golden Myanmar National Promotion Conferenceအား မြန်မာဖက်မှ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးနှင့် တရုတ်ဖက်မှ ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် အမြဲတမ်းကေ်ာမတီ၏ ပါတီကော်မတီဝင်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးဖြစ်သူ Mr. Lu Xian Bianတို့ ကြီးမှူး၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းConference၌ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချ သူများအသင်းနှင့် ပင်းရှန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သစ်သီးဝလံကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အသင်းတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနှင့် တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတို့၏ ကုန်သွယ်မှုကိုကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မှုမှာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၀၅၅ဒသမ၄၈၇ သန်း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၇၀၁ဒသမ၇၀၀ သန်းနှင့် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၆၃ဒသမ၅၃၈ သန်း အသီးသီးရှိခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းမှုမှာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇၄၉ဒသမ၂၈၆ သန်း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆,၀၈၇ဒသမ ၆၉၃သန်းနှင့် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၃၃၀ဒသမ၀၆၁ သန်း အသီးသီးရှိခဲ့ပါသည်။
နန်နင်းမြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ပါဝင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသရှိ ကွမ်ရှီးကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကွမ်တုန်း ပြည်နယ်နှင့် ဟူနန်ပြည်နယ်တို့၏ စုစုပေါင်းလူဉီးရေမှာ ၂၂၈ဒသမ၈၄သန်း ရှိပါသည်။ ၎င်း ပြည်နယ်(၃)ခုတို့အနက် တရုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်နယ်များ၏ စီးပွားရေးအဆင့်တွင် ကွမ်တုန်းပြည်နယ်မှာ အဆင့်(၁)နေရာ၌လည်းကောင်း၊ ဟူနန်ပြည်နယ်မှာ အဆင့် (၉)နေရာ၌လည်းကောင်း၊ ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာ အဆင့်(၁၇)နေရာတွင် လည်းကောင်း အသီးသီးတည်ရှိကြပါသည်။
တရုတ်အကောက်ခွန်ဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းများအရ တရုတ် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်(၃)တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ မြန်မာ-တရုတ် စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၌ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ၁၁ဒသမ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ၁၂ဒသမ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁၂ဒသမ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးတိုးတက်လာခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ယခုနှစ်၌ပင် ပထမ(၅)လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ၎င်းပြည်နယ်(၃)ရပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှုမှာ တရုတ်-မြန်မာစုစုပေါင်းကုန်သွယ် မှု၏ ၁၂ဒသမ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုးတက်လာမှုများမှာ တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲမှတဆင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုများ၏ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲတွင် နှစ်စဉ် ပါဝင်ပြသခဲ့ခြင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်သာမက ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော နိုင်ငံများနှင့်ပါ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ကာ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုများကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံအချင်းချင်း ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေး၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများပါ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အပြင် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာကဏ္ဍများတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာလျက်ရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။